Taura nesu - Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd.
Kero: Kwete. 999 Fushan Road, Xiaolan Economic Zone, Nanchang Guta, Jiangxi 330200, PR China
Muvhuro-Svondo: maawa makumi maviri nemaviri online
Iyo inyanzvi yekugadzira inoshanda mukutsvaga uye kusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yezvigadzirwa zvemishonga. Iyo chikamu chevaridzi chose cheJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (chidimbu: Sanxin Medical, stock kodhi: 300453), neYunnan Sanxin yakadzika midzi muYunnan ichabatsira kusimudzira kwemaindasitiri ekurapa emuno uye mabasa ekurapa; panguva imwe chete, ichaita basa rakanaka se "bridgehead" yemagadzirirwo eSanxin Medical kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero, ichipenya South Asia neSoutheast Asia. Iyo kambani iri munzvimbo yeKirin yeAnning Industrial Park, Kunming City, Yunnan Province, ine nzvimbo inosvika anopfuura 60,000 mativi emamita; iyo inonyanya kugadzira kuraswa kwepamusoro-kumagumo infusion akateedzana uye kuchenesa ropa dzakateedzana zvigadzirwa.
Iyo yenyika yepamusorosoro bhizinesi rinoshanda mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa, kutengesa uye hunyanzvi rutsigiro rwehemodialysis nhevedzano yezvokurapa michina Iyo inopa mupasi rese epamberi yepamusoro hemodialysis michina uye mhinduro.
Yakagadzwa muna Nyamavhuvhu 2018, ine mari yakanyoreswa yemamirioni gumi nemaviri yuan, inoshanda mukupa wechitatu-bato yakawanda-inoshanda warehousing, kugovera, manejimendi cheni manejimendi uye mamwe mabasa ekugadzirisa ekurapa michina yekugadzira uye anoshanda makambani. Iyo kambani iri mune yenyika Xiaolan Ehupfumi neTekinoroji Yekuvandudza Nzvimbo uye iri yakazara-muridzi chikamu cheJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (stock kodhi: 300453).
Iyo kambani iri kunyanya kuita mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzirwa uye manejimendi yemidziyo yekurapa; bhizinesi rekupinza rezvinhu zvakasvibirira uye zvekubatsira, zvemuchina michina, zvishandiso, zvikamu zvehunyanzvi uye nehunyanzvi hwehunyanzvi hunodiwa mukugadzirwa uye nekutsvaga kwesainzi kwekambani, uye kugadziriswa kwezvinhu zvakaunzwa kunze kwekambani.
Ningbo Filal Medical Zvigadzirwa Co, Ltd. ibhizinesi rinotarisa muR & D, kugadzirwa uye kutengesa kweanoraswa cardiothoracic kuvhiya zvigadzirwa. Inogadzira mafirita eropa anochengeterwa eropa, anorasa mafirita eropa, uye mapapu emwoyo anoraswa. Iyo yekunze extracorporeal circulation tubing package (extracorporeal circulation tubing), inoraswa inotonhora cardioplegia perfusion zvishandiso uye zvimwe zvigadzirwa zvinotengeswa kuzvipatara zvikuru munyika yese, uye zvakashandiswa kiriniki muzvipatara zvinopfuura mazana matatu, uye zvese zvakawana mhedzisiro isingadiwe. Iyo mhando yechigadzirwa iri pakati pezvakanakisa muindasitiri uye ine mukurumbira wakanaka pakati pevashandisi.
Sichuan Weilisheng Medical Technology Co., Ltd. ("Sichuan Weilisheng" ipfupi), yakavambwa muna 2018, ibhizimusi repamberi rinoshanda mukutsvagisa nekusimudzira, kugadzira, kutengesa uye sevhisi yezvigadzirwa zvemishonga. Sichuan Weilisheng mubatsiri wevaridzi veJiangxi Sanxin Medical Technology Co, Ltd. (kodhi yemasheya: 300453). Mushure meSanxin yekuvandudza kwemaindasitiri kubva kuchamhembe kusvika kuchamhembe, ine imwe kumabvazuva kusvika kumadokero kwemaindasitiri marongero, ichivimba neChengdu Seyakakosha nzvimbo ye "Belt uye Road" chirongwa, isu takazvipira kuve inotungamira yekuchenesa ropa indasitiri chikuva opareta ane advanced utsanzi, hunyanzvi uye mhando, zvichisimbisa simba repasi rese rezviratidzo zvemunyika.